Health – Page2– Online BBC
यस्ता कारण जसले नेपालीहरु असामयिक मृत्युको मुखमा धकेलिदै..
विभिन्न उमेर समुहका नेपालीहरुले विभिन्न कारणले असामयिक मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । विभिन्न योजना र काम गर्ने इच्छाशक्ति भएपनि शारिरिक रुपमा नै अस्वास्थ्य हुँदै मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपालीहरु यस्ता १० कारणले गर्दा असामयिक मरणको भागिदार बनेका छन । नेपालमा विगत एक दशकमा मुटुको धमनी साँघुरिएर अक्सिजन कम हुने समस्या, विभिन्न सरुवा रोग, आमा एवम् नवजात शिशुसम्बन्धी रोग र अन्य कारणबाट मानिसहरूको असामयिक मृत्यु हुने गरेको छ । अन्य प्रमुख कारणमा झाडापखाला, नवजात शिशुमा हुने इन्सेफलोपथी अर्थात् मस्तिष्कको सुजन र नवजात शिशुमा हुने अन्य रोग रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ। ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज स्टडी २०१६ मा नेपाल लगायत अन्य देशबाट सन् २००५ देखि २०१६ सम्म सङ्कलित तथ्याङ्कको अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ। उक्त अध्ययनले मस्तिष्कको रक्तनलीका रोग, सीओपीडी भनिने श्वासप्रश्वासको
Jun42018 by OnlineBBCNo Comments
औषधीय गुणले भरीपूर्ण घ्युकुमारीकाे यी फाइदा
काठमाडौँ । घ्युकुमारी रसीलो, रसदार हुन्छ । यो औषधीय गुणले भरीपूर्ण हुन्छ । घ्युकुमारीलाई हरेक तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । आगोले पोलेको ठाउँमा, लोसनको रुपमा , र पिउने जुस आदिको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । घ्युकुमारी जुसमा क्याल्सियम, सोडियम, आइरन, पोटासियम, क्रोमियम, मैगनीज, ताम्बा जस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ । घ्युकुमारीमा १८ धातु, १५ एमिनो एसिड, र १२ थरीका भिटामिन पाइन्छ । यसले शरिरमा रगतको मात्राको कमीलाई कम गर्नुका साथै शरिरमा प्रतिरोधी क्षमतामा बृद्धी गर्छ । घ्युकुमारी जुस गर्भासयको रोग तथा पेटको विकार नष्ट गर्नका लागि समेत फाइदा पुर्याउँछ । गर्मी, वर्षाका कारण हुने विभिन्न समस्याबाट समेत यसले मुक्ति दिने गर्छ। गुलाब जलमा घ्युकुमारीको रस मिसाएर अनुहारमा लगाउनाले अनुहारमा चमकता आउँछ । मोटोपन घटाउन परेमा घ्युकुमारीको जुस पिउनुपर्ने एक अध्ययनले जनाएको छ । कब्जियत , अपच हुने र
काठमाडौं । भियाग्राले सेक्स पावर बढाउने दाबी गरिन्छ । यसको सेवनले यौन दूर्वलताको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिन्छ । यौन दूर्वलता भएकाहरुलाई यसको सेवन हीनताबोधको अन्त्य गराउँछ । भियाग्रााको सेवनले यौनांगमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यौनेच्छा जाग्छ, तब पुरुषको यौनांगमा रगत प्रवाह गर्ने धमनी खुल्ला हुन्छ भने रगत फर्काएर लाने शिरा खुम्चिन्छ। यसको परिणाम स्वरूप यौनांगमा पर्याप्त मात्रामा चाप पैदा भई यौनांग लामो र कडा हुने बताइन्छ । भियग्राले यौनांगमा नाइट्रिक अक्साइडको कामलाई बढाउने हुँदा पुरुष यौनांगको मांसपेशी खुकुलो बनाइदिन्छ। जसका कारण रक्तप्रवाह बढ्न गई यौनांगको कमलो तन्तु बिस्तारै कडा र दह्रो हुँदै जान्छ । यौन दूर्वलता भएकाले यौन सम्पर्क गर्नु आधादेखि चार घण्टाअगाडि बढीमा एक दिनमा एक पटक मात्र २५ देखि सय मिलिग्राम भियाग्रा सेवन
आम नेपालीले सामना गर्दै आएका स्वास्थ्य समस्या मध्ये थाइराइड पनि एक महत्वपुर्ण रोग हो । थाइराइड के हो ? यो कसरी हुन्छ ? थाइराइड बाट कसरी बच्ने ? थाइराइड हुदा के खाने, के नखाने ? भन्ने बारे पेट, छाती तथा मुटु रोग बिशेषज्ञ डा. आशिष त्रिपाठीले निकै महत्वपुर्ण सुझाव दिएका छन । रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु उचित हुन्छ भने झै डा. त्रिपाठीले थाइराइड रोग लाग्न नदिन के गर्ने र लागीहालेमा कसरी उपचार गर्ने ? भन्ने बिषयमा निकै उपयोगी जानकारी दिएका छन । डा. त्रिपाठीका सुझाव तलको भिडियोमा हेर्नुहोस ः आम नेपालीले सामना गर्दै आएका स्वास्थ्य समस्या मध्ये थाइराइड पनि एक महत्वपुर्ण रोग हो । थाइराइड के हो ? यो कसरी हुन्छ ? थाइराइड बाट कसरी बच्ने ? थाइराइड हुदा के खाने, के नखाने ? भन्ने बारे पेट, छाती तथा मुटु रोग बिशेषज्ञ डा. आशिष त्रिपाठीले निकै महत्वपुर्ण सुझाव दिएका छन । रोग लागे
Jun32018 by OnlineBBCNo Comments
प्रकृतिको नियम नै यस्तो छ कि मानिसले जन्म लिन्छ जवान हुन्छ बुढो हुन्छ अनि प्राण छोड्छ । अब बैज्ञानिकहरुले बुढो नदेखिने औषधी बनाएका छन् । बैज्ञानिकहरुले मान्छेलाई सँधै जवान राख्ने औषधी पत्ता लगाएको दावी गरेका हुन् । यो औषधीले बढीरहेको उमेरको प्रभाव शरीरमा पर्न नदिने र मानिसलाई लामो समय सम्म जवान राख्ने दावी शोधकर्ताहरुले गरेका छन् । सगरी मुटुको समस्या समाधान गर्ने यो औषधीले मानिसलाई जवान रहनका लागि मद्धत गर्ने छ । स्क्रिप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट र मेयो क्लिनिकका शोधकर्ता बैज्ञानिकहरुले ′सेनोलाइटिक्स′ नामको औषधी पत्ता लगाएका हुन् । उमेरका कारण रोगी हुँदै गएका मानिसलाई यस्ता रोगबाट बचाउँन समेत यो औषधी उपयोगी हुन सक्ने छ । बैजानिकहरुका अनुसार यो औषधीले मानिसलाई बुढो हुनबाट रोक्ने छ । शरीरका कोषिकाहरुलाई जिवित र सक्रिय राखेर मानिसलाई जवान राख्ने तत्व यो औषधीमा रहेको बताइएको छ । बैज्ञ
Jun22018 by OnlineBBCNo Comments
तपाईंको उमेरअनुसार रक्तचाप ठीक छ ? सधैंभरि तपाईंको रक्तचाप (ब्लड प्रेसर) १२०/८० एमएमएचजी (मिलिमिटर्स अफ मर्करी) हुँदैन ???
काठमाडौँ — तपाईंको उमेरअनुसार रक्तचाप ठीक छ ? सधैंभरि तपाईंको रक्तचाप (ब्लड प्रेसर) १२०/८० एमएमएचजी (मिलिमिटर्स अफ मर्करी) हुँदैन । उमेर लगायत विभिन्न शारीरिक, मानसिक, भौगोलिक स्थितिले तपाईंको रक्तचापलाई निर्धारित गर्छ । हालका दिनमा १२०/८० भन्दा कम रक्तचापलाई सामान्य मानिन्छ । यसैले आफूलाई कति रक्तचाप हुनु सामान्य हो, त्यो जान्न अंकमा भर नपरेर मुटु रोग विशेषज्ञको सल्लाह मान्नुपर्छ । तपाईंले आफ्नो रक्तचापलाई सामान्य ठाने पनि चिकित्सकले तपाईंको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर औषधि प्रस्तावित गर्न सक्छन् । ‘विभिन्न अनुसन्धानमा सामान्य व्यक्तिको औसत रक्तचाप देखाइने गरिए पनि कतिलाई सामान्य र कतिमा औषधि सुरु गर्ने भन्नेबारे निर्णय आफूले नगर्नुस्,’ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिल भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिलाई माथिल्लो रक्तचाप १३० भए पनि असर गर्न सक्छ भने कुनै व्यक्तिलाई माथिल्लो रक्तचाप १३५ भए प
May302018 by OnlineBBCNo Comments
बीबीसी विज्ञानः कफी पिउनुका तीन फाइदा जुन तपाईंले जान्नै पर्छ
कफीले स्वास्थ्यलाई पुर्याउने फाइदाबारे विभिन्न अनुुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ । संसारमा यस्ता धेरै मानिस छन् जो एक कप कफी नपिई आफ्नो दिनको सुरुवात गर्न सक्दैनन् । यस्ता व्यक्तिहरुका अनुसार कफीले उनीहरुको ‘डेली प्रोडक्टिभीटी’ अर्थात् आफ्नो दैनिकको उत्पादकत्व क्षमतामा विशेष प्रभाव पार्ने गर्दछ । कफी सप ठूला शहरमा मात्र नभई स–साना शहरमा पनि निकै चलनचल्तीमा छ । कफी सपमा साथीहरु, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार र बेरोजगारहरुको समूह जम्मा हुने गर्छन् । यो अहिलेको मात्र नभई निकै पुरानो प्रचलन हो । यद्यपी, कफीका यी सामाजिक मेलमिलापको फाइदाबारे त हामी सबैलाई थाहा छ । तर यो स्वास्थ्यका लागि कति फाइदाजनक छ ? यसबारे निकै कम मानिसहरु तथ्यको आधारमा चर्चा गर्दछन् । कफी फाइदाजनक ! मिथ वा वास्तविकता ? दिनमा तीनदेखि चार कप कफी पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । अनुसन्धानकर्ताका अ
अत्यन्तै खतरनाक के हो ? ब्रेन फग रोग, कसरी जोगिने ?
ब्रेन फग रोग लागेपछि सोच्ने क्षमता प्रभावित हुन्छ । यसो हुँदा जतिखेर पनि कन्फ्युज्ड र डिसअर्गनाइज्ड फील गरिन्छ । तपाईंले सोचेको र बोलेको कुरामा अन्तर हुन्छ । एरिजोना विश्वविद्यालयबाट एमडी गरेका विलियम ब्लाह्दले बताएअनुसार, यो रोगले मानिसको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई प्रभावित गरेर दिमागमा असर पार्छ । यसलाई मल्टिपल स्क्लेरोसिस पनि भनिन्छ । धेरै मानिसलाई स्मरणक्षय, ध्यान केन्द्रित नहुने समस्या अनि योजना बनाउने र बोल्ने समस्या हुन्छ । स्मरण अभ्यासले तपाईंलाई सहायता दिन सक्छ । थेरापिस्टको सहयोग लिएर तपाईं रोग हटाउन सक्नुहुन्छ । डिप्रेसन हुँदा मानिस ब्रेन फग फील गर्छन् । यसबाट ऊर्जा क्षय हुन्छ । डिप्रेसन हटाउन मेडिकेसन र टक थेरापी प्रयोग गरेर समस्या हटाउन सकिन्छ । क्यान्सर ट्रीटमेन्ट केमोथेरापीमा प्रयोग गरिने औषधि कडा हुन्छन् । त्यसले पनि रोगीलाई चीजहरू याद राख्न समस्या ल्याउँछ
May222018 by OnlineBBCNo Comments
काठमाडौं : खाडीको चर्को गर्मीमा काम गरेर स्वदेश फर्केका श्रीमानलाई अघि लगाएर निन्याउरो अनुहार लगाउँदै युवतीहरु अचेल निसन्तान विशेषज्ञ डा. सविना श्रेष्ठ सामु जँचाउन आउँछन्। उनीहरुको प्रायः एउटै दुःखेसो हुन्छ,‘जति यौन सम्पर्क गरेपनि सन्तान बसेन।’ खाडी राष्ट्रमा चर्को गर्मी सहेर काममा तल्लीन भएका युवाहरु स्वदेश फर्केपछि सन्तान नभएकोमा चिन्तित छन्। ‘घर आएको बेला सुरुको दुई महिना कोसिस गर्छन तर गर्भ नबसेपछि विदेश जानेबेला निन्याउरो अनुहार लगाउँदै सन्तान चाहियो भन्दै आउँछन ’ डा. श्रेष्ठको अनुभव छ। कतार,साउदी अरब र मलेसियामा काम गरी फर्केका दम्पतीहरु परामर्श र उपचारका लागि अस्पताल र निसन्तान केन्द्रमा धाउने गरेका छन्। गर्भ नबस्नुमा पुरुष र महिलाको बराबरी जस्तो भूमिका हुन्छ। तर, पछिल्लो समय खाडी राष्ट्रमा काम गरी फर्केका पुरुषमा शुक्रकीटको संख्यात्मक र गुणात्मक ह्रास आएको परीक्षणबाट पत्ता
लिच्ची खाँदा हुन्छन् यी सात फाइदा…जान्न का लागि पढ्नु होस् !!!
लिच्ची गर्मीमा पाइने फल हो । यो खाँदा स्वादिलो त हुन्छ नै, स्वास्थ्यका लागि लाभदायक पनि हुन्छ । यसमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन सी, भिटामिन ए र बी कम्प्लेक्स पोटेसियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, आइरन र मिनरलहरू पाइन्छन् । गर्मीमा दिनदिनै लिच्ची खाँदा अनेकौं समस्या भाग्छन् । यहाा हामी फाइदाहरू बताउँछौं । बलियो रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता लिच्चीमा बिटा क्यारोटिन, राइबोफ्लेभिन, नियासिन र फोलेट टन्नै हुन्छ । यसले रोगप्रतिरोधक क्षमता बलियो बनाउँछ । पेटसम्बन्धी समस्या भएका मानिसले लिच्ची खाँदा राम्रो हुन्छ । तौल नियन्त्रण लिच्चीमा फाइबर पाइन्छ जसले तौल नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । छिट्टै मोटोपन घटाउन चाहने मानिसले लिच्ची खानुपर्छ । बिहान लिच्ची खाँदा भोक नियन्त्रणमा रहन्छ अनि पेट पनि भरिएको अनुभव हुन्छ । पानीको आपूर्ति लिच्चीको रस पौष्टिक हुन्छ । गर्मीमा शरीरमा पानीको अभाव हुन्छ ।